बिना माग यो बैंकले ८४ हजार ग्राहकलाई दियो ऋण Bizshala -
काठमाण्डौ । कुनै पनि बैंकबाट ऋण प्रवाह गर्नुअघि तोकिएका मापदण्ड गरी ऋणि र बैंक दुवै सहमत हुन आवश्यक हुन्छन्। तर, अचानक हजारौँ ग्राहकलाई सहमति बिनै ऋण प्रवाह गरियो भन्दा अचम्म लाग्न सक्ला।
यस्तै घटना भएको छ छिमेकी मुलुक भारतमा । त्यहाँको इन्डसइन्ड बैंकले सहमति बिनै ८४ हजार ग्राहकलाई ऋण प्रवाह गरेको छ। बैंकले सन् २०२१ को मेमा प्राविधिक गडबडीका कारण करिब ती हजार ग्राहकलाई बिना अनुमति ऋण दिएको हो।
ऋण पनि त्यस्ता ग्राहकलाई प्रवाह गरिएको छ, जो पहिले नै ऋण तिर्न नसकेर खराब ऋणिको सूचीमा समावेश हुन लागेका छन्।
बैंकले ती ऋणिलाई ‘लोन एभरग्रिनिङ’ शीर्षकमा ऋण प्रवाह गरेको देखिएको छ। लोन एभरग्रिनिङको अर्थ डिफल्टको संघारमा पुगेको ऋणको नवीकरण गर्नका लागि त्यस्ता फर्महरुलाई दिने ताजा ऋण हो।
बैंकका कर्मचारीहरुले २ दिनभित्रै बिना सहमति ग्राहकलाई ऋण उपलब्ध गराउने सूचना जारी गरेका थिए। तर, बैंकले यो प्राविधिक गडबडीका कारण भएको जनाएको छ। बैंकले यो हाल प्राविधिक गडबडी हटाउने काम भइरहेको जनाएको छ।
बैंकले लोन एभरग्रिनिङ गरिन लागेको आरोपको खण्डन पनि गरेको छ।
यद्यपि बैंकको सहायक इकाइ बीएफआईएलद्वारा जारी र प्रबन्धित ऋण नियामकद्वारा जारी दिशानिर्देशहरुको पूर्ण रुपमा पालना गरेर ऋण प्रवाह गरेको देखिन्छ। जसमा कोभिड–१९ को पहिलो र दोस्रो लहरको प्रकोपका क्रममा दिइएको ऋण पनि समावेश छ। – एजेन्सी
रु. ६ करोडमा बिक्यो एक बोतल ह्विस्की, के छ त्यस्तो खास ?
काठमाण्डौ । एक चिनियाँ यात्रीले टर्कीको इस्तानबुल विमानस्थलमा एक...
यसकारण अस्ट्रेलियन ओपनमा भाग लिन पुगेका विश्व चर्चित टेनिस
काठमाण्डौ । विश्व नम्बर १ टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिचलाई ...
माघदेखि ‘कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन्स’
काठमाण्डौ । की इन्टरटेन्मेन्ट र थ्री प्रोडक्सनद्वारा की...
आकाशबाट भयो माछाको वर्षा, के छ वैज्ञानिक कारण ?
काठमाण्डौ । विश्वमा थुप्रै यस्ता रहस्य आज पनि कायमै छन्। जसमा हामी...
एउटा पुरानो ब्ल्यांकेटले जीवन कायापलट, ७७ सेकेन्डमै बने
काठमाण्डौ । मानव जीवनमा विभिन्न वस्तुहरु आवश्यक पर्छन्। आधुनिक...
उडिरहेको विमानभित्रै एक शिक्षिकालाई कोरोना पुष्टि, ५ घन्टा
काठमाण्डौ । अमेरिकाकी एक शिक्षिकाले कोरोना पोजिटिभ भएको पुष्टि...
जोकोहीले गर्नुपर्छ यी ५ खर्च, पैसा जाँदैमा दुःख लाग्दैन, बरु
काठमाण्डौ । पैसा कमाउनेबारेमा जोकोही कुरा गरिरहेका हुन्छन्।...
अब स्क्रिन चाटेर टीभीमा देखाइएका खानेकुराको स्वाद चाख्न
काठमाण्डौ । जापानमा एक प्राध्यापकले स्क्रिन चाटेर टीभीभित्र...